Dagaalyahan Soomaaliya ah oo Mareykanku ku dilay Ciraaq – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Baraha ay leeyihiin qolooyinka Jihaadiga ee Carbata iyo Soomaalida ayaa baahiyey muqaalka nin Soomaali ah la sheegay inu lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo Mareykanku ka geystay dalka Ciraaq.
Ninka Soomaaliga waxaa magaciisa lagu sheegay Abuu Cantara Al-soomaali, wuxuuna ka mid ahaa dagaalyahannada Khalaafada Islaamiga ah ama Daacish, sida loo yaqaanno.
Abuu Cantara ayaa la sheegay in lagu dilay agagaarka magaalada Al Qaa’im ee gobolka Al-anbaar halkaas oo diyaaradaha Mareykanka ay 23-kii bishaan duqeymo ba’an ka geysteen.
Ninka Soomaaliga ee duqeynta lagu dilay oo la sheegay iney u dhaxday xaas u dhalatay dalka Tunisia ayaa xaqiijisay in saygeeda oo ahaa Muhaajir Soomaali ah uu ku dhintay duqeyn ay diyaaradaha Mareykanka ka geysteen Ciraaq.
Dhallinyaro badan oo Soomaali ah ayaa u dagaallama Khalaafada Ismaaliga ee Ciraaq iyo Suuriya, waxaana dhawaan qaar iyaga ka mid ah cajal muuqaal ah usoo direen Alshabaab, kaasoo ay ku codsadeen iney ku biiraan Khalaafada.